Ubuciko kanye Ezokuzijabulisa, Imidlalo wenhlanhla
Uma ukuphila omdala, kanye naye abantu abaningi kufika isimiso zibuthuntu - umsebenzi njalo, izinto evamile futhi ngezinye izikhathi awunaso isikhathi sokuzihlola ngcono ukufunda okuthile okusha. Kukhona ISIFISO esikoleni ebhentshini uma ngingenzi lutho ekhethekile, kodwa ngesikhathi esifanayo afunde izinto eziningi ezithakazelisayo. Mhlawumbe-ke thina nje abaqapheli ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba ziphenduke futhi ungami. Nzima njengoba lokhu kuqeqeshwa wanikezwa, kwaba mnandi ukubona imiphumela yomshikashika wabo bokusungula. Uma logic nezibalo - lena "mkhuba" yakho ezikhuthaza ukuyibhala poker. Lena ikhadi umdlalo ezithakazelisayo futhi bezijabulisa kakhulu lapho kufanele hhayi kuphela ukwazi imithetho, kodwa futhi ukuze ukubala. Ukusebenzisa ulwazi lwakho umdlalo, ungayeki sikhule ubuchopho ubudala, ngoba uma kuziwa ekukhuleni ngokwengqondo amaseli zakhe ezimpunga. Ingcono elele phezu kombhede futhi iwashi TV.
Ngokusho ucwaningo of omunye zemfundo ezidumile American, i-poker umdlalo kuthinta ukuthuthukiswa logic nokucabanga abafundi futhi ithuthukisa izici ngazinye ukucabanga kwabo. Phela, othisha ziyazi ukuthi izindlela okunengqondo kanye nokusebenza basungula ngokushesha eminyakeni yokuqala esikoleni. Ngakho-ke, ngubani kahle umdlalo, ngokuqinisekile ngeke baqonde izibalo. Ukuze konke lokhu, kunomthelela ekuthuthukiseni amasu engqondweni yethu: ukuhlaziya, zamagama, kucatsanisa nje okungaqondile. Ezinye izikole kakade kwethulwa amakilasi ozikhethela of Poker, lapho afundela khona izimiso eziyisisekelo logic nezibalo yomdlalo. Uma ukhokha ukudlala poker okungenani amahora ambalwa isonto, abantu baye bakhiqiza ikhono ngokuzimela futhi sisheshe senze izinqumo ezifanele, kwakheka ngendlela yokudala yokucabanga.
Singasho ukuthi lo mdlalo elula lifundisa isiyalo: the abadlali ukuqopha, ukuhlaziya kanye nokusakaza ngamaphutha abo, ahlukanisa umdlalo izimo futhi wenze amaphuzu ezibalulekile ngokwakho. Ngakho esikhathini esizayo kuyokusiza ukuba uhlele ukuphila kwabo, ukuhlela ngokwabo izinto eziza kuqala futhi ugcine isikhathi esiyigugu, okungasekelwe ezifundiswa esikoleni esivamile, kodwa utshele ku Poker Stars. Kuyaphawuleka ukuthi umdlalo we-poker kuphakamisa IQ level, futhi ukukhuluma nomqondo ofanayo, uqonde kangcono abantu siqeqesheke wokubambisana nabo, ukuba nabo ngokwakho.
Ngisho noma ungakaze wadlala poker - akukephuzi kakhulu ukuqala, okubaluleke kakhulu, ningakhungathekiswa ahlehliswa, futhi kungase phakade zaqhubeka zihleli khona. Uma i-poker ungafunda ingane, omdala nakakhulu. Manje ucwaningo yayo abe Ukukhetha olubanzi izihloko kanye computer izinhlelo ekhona amawebhusayithi amaningi lapho ungakwazi ukudlala poker mahhala. Ukuze akuphekelele poker party uzothola eziningi uzimisele abasebenzisi Inthanethi.
Ukuze ube umuntu ophumelelayo sifinyelele lukhulu, udinga ukusebenza kanzima kanye nzima, kubalulekile ukuba bagxile umgomo. Wonke umuntu wonke amathuba ukuze abe umdlali abanamakhono. Ngikufisela inhlahla!
Idlalwa kanjani i-solitaire "Square sikaNapoleon"?
Hlobo luni imidlalo ungadlala ekhaya? Nguwena ongazikhethela
Uhlelo Poker: Sikhona yini isidingo?
"Clotrimazole" isixazululo nail ukhunta: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa kanye nokusungulwa
Kelly Lynch - umdlali waseshashalazini American, umculi ejwayelekile izindima okukhulu
Izici calcium. calcium izakhiwo. calcium ifomula
Irrigator Waterpik: yokusetshenziswa futhi impendulo